Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Hawaii na -akọ akụkọ mbibi ọhụrụ nke mgbawa ugwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • HITA • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbawa ugwu ugwu Hawaii
N'ihe dị ka elekere 3:20 nke mgbede Hawaii Standard (HST) taa, Wenezdee, Septemba 29, 2021, mgbawa malitere na Halemaʻumaʻu ndagwurugwu dị na Kīlauea's caldera, n'ime Hawai'i Volcanoes National Park.
Mgbawa agbaala n'ime ọdọ mmiri lava ochie dị na ndagwurugwu dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ma na -emepụta mmiri na -asọ asọ n'elu ọdọ mmiri ahụ.
Okpokoro ọzọ mepere n'ihe dị ka elekere 4:43 nke abalị taa na mgbidi ọdịda anyanwụ nke ndagwurugwu Halemaʻumaʻu.
Hawaiian Volcano Observatory welitere ọkwa anya site na oroma ruo uhie, nke pụtara na mgbawa ugwu dị ugbu a n'okpuru ndụmọdụ elekere.
Awara oghere n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke nnukwu agwaetiti ahụ n'ime ọdọ mmiri na -arụ ọrụ n'ime ya Halemaʻumaʻu ndagwurugwu site na Disemba 2020 ruo Mee 2021, na ha na -emepụta mmiri na -asọ n'elu ọdọ ọdọ ochie.
N'ihe dị ka elekere 4:43 pm HST, windo ọzọ mepere na mgbidi ọdịda anyanwụ nke oghere Halemaʻumaʻu.
Hawaiian Volcano Observatory tinyere foto 3:40 nke abalị nke lava na ndagwurugwu ahụ obere oge ka ọ bulisịrị ọkwa anya maka ugwu mgbawa na elekere site na ndụmọdụ.
Dị ka Hawaiian Volcano Observatory si kwuo, n'ehihie a wetara mmụba ala na arụ ọrụ seismic. Ewelitere ọkwa ọkwa ahụ site na oroma ruo ọbara ọbara (ịdọ aka na ntị) n'ihe dị ka elekere 4:00 nke mgbede.
Ebe mgbawa ahụ juputara kpamkpam n'ime oghere Halemaʻumaʻu, ugbu a enweghị ihe iyi egwu na mpaghara ebe ndị mmadụ bi. Ndị ọrụ gọọmentị ga -enyocha ọrụ na ihe egwu dị ka mgbawa ahụ na -aga n'ihu.
Hawaii Shira kesara na twitter ihe na -erughi ọkara awa gara aga: Nwa m nwoke kwuru na ọ hụrụ mmụba nke isi sọlfọ dioxide mgbe ọ gara buru nwa ya n'ụlọ akwụkwọ Volcano Charter n'ehihie a.
Oge ikpeazụ Kilauea gbawara bụ mgbe ọ malitere na Disemba 2020. Ọ gara n'ihu na -asụ mmiri ruo May 2021. Mgbawa ahụ mepụtara ọdọ mmiri ọhụrụ na elu ugwu.
N'ime oge ikpeazụ ọ na -arụ ọrụ, Kilauea wepụtara ihe karịrị nde cubic 41, ma ọ bụ nde galọn 11, nke lava n'ime ụbọchị 157 ọ na -agbawa n'ihu.
Lava esiwo n'otu mpaghara ahụ gbapụ na 2018 mgbe Kilauea gbawara n'otu n'ime mpaghara ọgbaghara ya dị ala. Mgbawa ahụ bụ nke kacha edekọtabeghị na ugwu mgbawa. O bibiri ọtụtụ ụlọ ma chụpụ puku kwuru puku mmadụ.
Ngalaba steeti US na-agba ndị America ume ịhapụ Haiti ugbu a
Mba 33 na-ekwupụta mmachibido iwu na mmachi njem ọhụrụ
Gbanyụọ maka NASA SpaceX Crew-3
Agafee mbugharị: IMEX America mere nzukọ nkeonwe nke ukwuu…
Mkpọchi zuru oke, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa a na-amanyere na mba niile na...
Nkesa ọgwụgwọ mgbochi ọrịa COVID abụghị maka...
Njem nlegharị anya ga-abụrịrị akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe…
India bu n'obi ịtọlite ​​ọdụ ụgbọ elu 200 ọhụrụ site na 2024
Jordan iji nwetaghachi njem nlegharị anya tupu ọrịa ọrịa na…
Ndị bịara IMEX America na-agba ọsọ maka ịdị mma
118% ịgba ọgwụ mgbochi Gibraltar kagburu ekeresimesi ọhụrụ…
Helikopta na India: Ọ ka mma maka akụrụngwa na ...
Ozi ọhụrụ iji chebe ụwa nke NASA na SpaceX weputara
WTM dịịrị ihe nrịba ama ndị njem nlegharị anya mara ọkwa
Dị ka mgbochi mgbochi njem US na -adị mfe, njem si UK ga -eme…
Ọmụmụ ihe mbụ n'ime mmadụ maka ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ…